Xildhibaano Guddoomiyaha Aqalka Sare ku eedeeyay khalqal gelin Siyaasadeed | Allbalcad Online
Home WARARKA Xildhibaano Guddoomiyaha Aqalka Sare ku eedeeyay khalqal gelin Siyaasadeed
Xildhibaano Guddoomiyaha Aqalka Sare ku eedeeyay khalqal gelin Siyaasadeed
Xildhibaanada Labada Aqal ee ka soo jeeda Gobolada Woqooyi we loo yaqaano Soomaaliland ayaa Gudoomiyaha Aqalka Sare ku eedeeyay in uu dayacay masuuliyadiisa ka qeyb galka Shirarkii looga hadlaayay Doorashooyinka ee ka dhacay Dhuusamareeb iyo Muqdisho.
Kulan ay Xildhibaannada ku yeesheena Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay kasoo saareen dhowr qodob oo u badan eedeyn kulul oo ay u jeediyeen Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi, waxaana kamid ah.
1: In Guddoomiyaha Aqalka Sare uu mas’uul ka aheyn soo xulista ama diyaarinta Guddiga hagaya Doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi.
2: in shirarkii Siyaasadeed ee looga hadlay Arrimaha doorashooyinka ee ka dhacay Dhuusamareeb iyo Muqdisho in ay aheyd in uu ka qeyb-galo Guddoomiyaha Aqalka Sare balse uu dhacay, isla markaana bedelkiisa uu shirarkaas uga qeyb galay Madaxweyne Farmaajo.
3: in uusan jirin heshiis is-afgarasho oo ay gaareen Xubnaha Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi ugu jira Golaha Shacabka, Golaha Aqalka Sare iyo Golaha fulinta.
4: in Guddoomiyaha Aqalka Sare qoraalkii uu shalay faafiyay ee uu uga hadlay Arrimaha doorashooyinka Xildhibaannada Gobolada Waqooyi iyo kuwii uu horay u soo bandhigay uusan cidna ku Mertelin, isla markaana ay abuuri karaan khilaaf iyo khalqal siyaasadeed.
5: Xubnaha Saddexda Gole ka tirsan ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi waxaa ay dowladda Soomaaliya ku metelaan raadinta midnimo loo dhan yahay, sidoo kalena uusan jirin Madaxweyne ama mas’uul kasoo jeeda Soomaaliland oo laga sugayo Xubnaha Guddiyada doorashoouinka iyo khilaafaadka.
Ugu dambeyn Warsaxaafadeedkabay soo saareen Xildhibaannada ayaa waxaa ay ku sheegeen in soo xulista & Magacaabista Guddiyada doorashooyinka Xildhibaannada Gobolada Waqooyi ay xaq u leedahay Xukuumadda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi weli wax jawaab ah kama bixin eedeynta ay u jeediyeen Xildhibaannada labada Aqal ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee loo yaqaano Soomaaliland.
Previous articleDEG DEG: Madaxweynaha HirShabeelle oo Shaaciyay inuu is-casilay
Next articleGalmudug oo taageero weeydiisatay Mareykanka